व्यक्तिगत अनुभव: मेरो छोराछोरीलाई अध्ययन स्वीडेन मा - भिडियो च्याट - जीवन डेटिङ - लाइव धाराहरु!
व्यक्तिगत अनुभव: मेरो छोराछोरीलाई अध्ययन स्वीडेन मा
यो बाहिर जान्छ कि इङ्गल्याण्ड मा छोराछोरीलाई स्कूल जान चार वर्ष मा, र मा एक हंगेरी भोजन पछि तिनीहरूले दिन संग सैंडविच मासु र प्याजआफ्नो विशेष परियोजनाहरु गर्न समर्पित को विशेष शिक्षा विभिन्न देशहरुमा, संसारको. अध्ययन । आज हामी जाँदै हुनुहुन्छ स्वीडेन, जहाँ जीवन को आमा, दुई छोराछोरी इरिकसन, जसले हामीलाई भन्नुभयो कसरी विद्यालय र मा यो देश । मेरो छोरा जान्छ गर्न, स्कूल र कान्छो एक.
शैक्षिक वर्ष स्वीडेन मा सुरु मा अगस्ट को दोस्रो आधा.
नै दिन मा, छोराछोरीलाई स्कूल जान द्वारा निर्णय नगरपालिका जो तिनीहरूले छन् भर्ना, कि त दुई नजिकैको शहर स्कूल वर्ष मा सुरु गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न दिन । एक परिणाम रूपमा, स्कूल समाप्त विभिन्न समयमा, तर यो सामान्यतया हुन्छ को पहिलो आधा मा, जुन । पाँच पटक एक वर्ष, छोराछोरीलाई स्कूल बिदाहरू: एक हप्ता प्रारम्भिक नोभेम्बर, मा लगभग तीन सप्ताह, क्रिसमस मा एक खेल हप्ताको बिदाहरू समयमा, फेब्रुअरी मा ईस्टर बिदाहरू अप्रिल मा, र गर्मी गर्न जुन देखि अगस्ट गर्न । नै खोल्न सबै वर्ष राउन्ड, बाहेक सप्ताहन्तमा र बिदाहरू छ । प्रशिक्षण दिन मा हाम्रो विद्यालय मा सुरु को बिहान । ग्रेड शून्य छोराछोरीलाई सिक्न पहिलो छ, तर तिनीहरूले वृद्ध प्राप्त, पछि उनिहरुले आफ्नो पाठ. उदाहरणका लागि, छोराछोरीलाई मा पाँचौं ग्रेड सिक्न पहिले । यदि आमाबाबुले आफूलाई अझै पनि छन्, अध्ययन वा काम, त्यसपछि बच्चा कोसँग दिन समूह काम उपलब्ध छ: अघि, अर्थात् एक बच्चा छ जो हुन सक्छ मा दिन को समूह । पहिलो ग्रेड र स्कूल पछि. बगैचा मा हाम्रो समुदाय संग काम गर्दछ: एक । धेरै चाँडै, हामी योजना गर्न खुला एक रात लागि समूह छोराछोरीलाई जसको आमा र बुबाले परिवर्तन मा काम. हाम्रो समुदाय, त्यहाँ मात्र हुन सक्छ एक बच्चा मा काम गर्ने वा बुझ्छ देखि आफ्नो आमाबाबुले. भने आमा वा बुबा छुट्टी मा छ वा छैन मा काम सबै कारण बच्चा हेरचाह, घन्टा को संख्या, जो समयमा तिनीहरूले गर्न सक्छन् भ्रमण बगैचा सीमित छ । हामी यी घण्टा, मा धनी समुदाय मा हामी प्रदान गर्न सक्छन् घण्टा, र स्टकहोम मा हामी प्रस्ताव घन्टा एक सप्ताह.
एक बच्चा मात्र गर्न सक्छन् मा रहन समूह रूपमा लामो तिनीहरूले घर बिहिन छन्, काम, वा अध्ययन.
केही नगरपालिका, तपाईं पनि कल आफ्नो आमाबाबुले मा काम पत्ता लगाउन र आफ्नो काम गर्ने घण्टा. मा स्कूल, छोराछोरीलाई एक मुक्त तातो भोजन । बच्चा भने एउटै वर्ग, तिनीहरूले हामीलाई प्रस्ताव नास्ता र दिउँसो चिया । यो हुन सक्छ संग दही, सैंडविच वा फल हो । त्यहाँ भएको छ एक भान्सा मा बगैचा कहाँ छोराछोरीलाई आनन्द उठाउन सक्छौं नाश्ता, नाश्ता, भोजन र खाजाको. बच्चाहरु खुवाउनुभयो छन्, न्यानो खाना, फल र दूध । अन्य समुदाय, तर सबै हाम्रो खाना छ, गर्न चीनी-मुक्त, त्यसैले तिनीहरू धेरै सख्त हो । मेरो पति र म काम आमाबाबुले, त्यसैले हामी यो यति-भनिन्छ मौसम छ । छोराछोरीलाई जसको आमाबाबुले काम पाली वा काम भाग-समय समयमा यो हप्ता हुन सक्छ विभिन्न कार्यक्रम छ । हामी उल्लेख बच्चा पहिले । यो समूह एक विशेष बटन क्लिक गर्नुहोस् देखिन्छ कि, जो पछि बच्चाको नाम रोशनी मा माथि हरियो. छोराछोरीलाई यो काम खुसीसाथ आफूलाई द्वारा, देख को सूचीमा आफ्नो नाम र नाम पनि छन् जो पहिले नै व्यवस्थित भर्ना गर्न.
क्यू: यो केटाहरू गर्दै नाश्ता छ.
नाश्ता पछि, छोराछोरीलाई छन् समूह विभाजित: एक रहन्छ घरमा र काम मा एक परियोजना, र अन्य बाहिर जान्छ. अब हाम्रो छोराछोरीलाई मा भाग छन् कि एक परियोजना गर्न समर्पित छ यो दुनिया मा जो हामी बाँच्न चाहन्छौं, राम्रो र सबै बगैचा मा देखिने छ माध्यम यो लेन्स । अधिकांश समय समर्पित छ पारिस्थितिकी, उदाहरणका लागि, छोराछोरी गए वन. तर विश्व मा जो हामी बाँच्न चाहन्छौं राम्रो छ छैन मात्र पारिस्थितिक, तर पनि शान्त र सामाजिक सम्बन्ध: छोराछोरीलाई व्याख्या यो मतलब के हुन, एक असल साथी, कसरी व्यवहार गर्न ठीक भोजन कक्ष मा. समयमा सम्पूर्ण प्रक्रिया र चयन फोटो, मेसेन्जर मा राखिएको छ गलियारे को प्रोजेक्टर भनेर आमाबाबुले देख्न सक्छौं आफ्नो बच्चा र आफ्नो साथीहरू. को हात मा आमाबाबुले, फोटो दिइएको छैन, र मा दल गर्न अनुमति छैन । यस तथ्यलाई कारण छ भनेर फोटो पोस्ट सामाजिक नेटवर्क मा, उदाहरणका लागि, हुन सक्छ एक विदेशी बच्चा । यो छ पछि एक भोजन । यो हुन्छन् एक मुख्य पकवान, यस्तो वा माछा, एक पक्ष पकवान (चरणको आलु, चामल, चाउचाउ) र एक सलाद (गाजर, बन्दागोभी, ब्रोकोली). भोजन पछि, छोराछोरीलाई सामान्यतया माथि रहन र जाने गर्न खेल मैदान मा खेल्न वा समूह. मौसम राम्रो संग, छोराछोरीलाई खर्च गर्न सक्छन् सारा दिन आउटडोर, त्यसैले शिक्षकहरू प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछ, एक राम्रो तन मा अप्रिल । पनि मौसम खराब छ भने, छोराछोरीलाई अझै तिनीहरूले एक पैदल लागि जाने, लामो समय को लागि छैन. मा, स्कूल छोराछोरीलाई जस्तै बारेमा म अध्ययन स्वीडेन मा धेरै वर्ष पहिले । निस्सन्देह, मतभेद छन्, तर अवधारणा छैन. उदाहरणका लागि, गणित कार्यक्रम एक सानो सजिलो छ, तर अंग्रेजी भाषा धेरै गम्भीर छ, त्यसैले पाँचौं ग्रेड, मेरो छोरा बोल्छ र अङ्ग्रेजी बुझ्नुहुन्छ. बच्चाहरु काम मा धेरै समूह बनाउन, समूह प्रस्तुतिहरु.
त्यहाँ छ, स्वतन्त्र अनुसन्धान र समस्या-सुलझाने.
ग्रेड एक पाँचौं ग्रेड कुनै, तिनीहरूले मात्र देखा कक्षा मा, एक ठूलो संख्या पछि राष्ट्रिय परीक्षा मा तीन मुख्य विषय: स्विडिश र अंग्रेजी र गणित.
शिक्षकको कुल स्कोर देखाइएको छ आधारित वर्ग परीक्षण र परीक्षा स्कोर । आमाबाबुले संग लगातार सम्पर्क शिक्षकहरू, स्कूल पनि आवश्यक मोबाइल फोन, साथै हजुरबा हजुरआमाले मामला मा आमाबाबुले अचानक सम्पर्क छैन तिनीहरूलाई तुरुन्तै । धेरै संस्थाहरु, त्यहाँ छ एक त-भनिन्छ संकट फोल्डर प्रत्येक बच्चाको लागि, समावेश जो सबै आवश्यक जानकारी: सम्पर्क नम्बर, एलर्जी (अचानक भएको दबाइ लिन), र अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारी । यो वर्ष, छोराछोरीलाई निर्णय गर्न पैसा कमाउन लागि यात्राको सम्पूर्ण वर्ग छ । हामी सुखा लागि बिक्री र. सबै यो, को पाठ्यक्रम, भइरहेको थियो छोराछोरीलाई लागि, तर आमाबाबुले भाग लिइरहेका थिए धेरै राम्रो र सबैभन्दा समर्थित केटाहरू छ । स्वीडेन मा, शिक्षक आवश्यक व्यवस्था गरेर छोराछोरीलाई आदर गर्न: उदाहरणका लागि, तिनीहरूले कहिल्यै खुलासा मूल्यांकन गर्न सम्पूर्ण वर्ग, के कहिल्यै संकट विश्लेषण सत्र । सबै यो गरेको छ एक मामला-द्वारा-मामला आधारमा, र सिक्ने प्रक्रिया पनि अनुकूल गर्न प्रयास गर्न आवश्यकता, प्रत्येक व्यक्तिगत बाल. स्कूल सिस्टम स्वीडेन मा धेरै लचिलो छ: अब, तपाईं सधैं यो गर्न सक्छन् पछि । यो सिर्फ कुरा को प्राथमिकता । र कसरी राम्रो कि कुनै पनि अवस्था मा म सोध्न सक्छौं शिक्षक आफ्नो प्रश्न, र उहाँले पाउनुहुनेछ समय को लागि मेरो जवाफ ।.
वयस्क: संग परिपक्व महिला
Di chat roulette dengan gadis-gadis
बालिका डेटिङ भिडियो च्याट संग दर्ता कामुक भिडियो च्याट लागि जोडे मुक्त डेटिङ सम्बन्ध च्याट पूरा विवाहित भिडियो च्याट बिना दर्ता प्रतिबन्धको बिना पूरा महिला परिचय निःशुल्क फोटो आगमन डेटिङ साइटहरु